Mandheera: Dabley gubtay gaari qaad labo kalana la tagtay & Alshabaab oo sheegtay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mandheera: Dabley gubtay gaari qaad labo kalana la tagtay & Alshabaab oo sheegtay
19th May 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mandheera – Mareeg.com: Dabley hubeysan oo loo maleynayo iney ka tirsan yihiin Alshabaab ayaa maanta weerar ku qaaday 3 gaari oo qaad ka qaaday magaalada Nairobi, islamarkaanka kusii jeeday degmada Mandheera.
Weerarka ayaa ka dhacay meel waxyar ka baxsan degmada Mandheera, waxaana sida wararku sheegayaan la gubay mid ka mid ah 3-daas gaari, halka 2 kalana ay qaateen dableydii weerarka qaadday.
Booliska Kenya oo ka warhelay weerarka ayaa dabagalay kooxda weerarka ku qaadday gaadiidka qaadka, waxaana la sheegay iney halkaas dhaawacyo kala laabteen, sida uu warbaahinta u sheegay goobjooge ku sugan degmada Mandheera oo magaciisa qariyey.
Booliska Kenya ayaan weli wax war ah ka bixin weerarka oo saaka dhacay, waxaase weerarkaas sheegtay Alshabaab.
Alshabaab ayaa qaar ka mid ah baraha ay leeyihiin ku qoray in gaadiidka ay weerareen ay wateen ciidamada Kenya, kana yimaadeen Ceel-waaq, halka dadka deegaanka Mandheere sheegayaan in gaadiidkaas ay leeyihiin dad Somali-Kenyan, islamarkaana ay qaad sideen.
“Ciidanka Mujaahidiinta ayaa duleedka Mandheera ka fuliyay howlgal guuleystay, 4 gaari oo dhanka Ceel-Waaq kasoo dhaqaaqday ayay mujaahidiintu wadada ugaleen kadibna 2 kamid ah gaadiidka mujaahidiinta ayaa qaniimeystay gaari kalane way gubeen” ayuu yiri mas’uul katirsan Alshabaab oo la hadlay bar ururkaas taageerta.
Madaxweyne Xasan oo xalay ku dheelmaday saldhigyo boolis iyo goobo ganacsi (Sawirro)
Gudoomiye ku xigeenka amniga degmada Hiliwaa oo weerar ka badbaaday